မမြင်​​သောကြိုး မြင်​​သောကြိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » မမြင်​​သောကြိုး မြင်​​သောကြိုး
Posted by naywoon ni on May 21, 2014 in Poetry | 16 comments
လွတ်​​မြောက်​​အောင်​ ထွက်​အ​ပြေးခိုင်းခံရတဲ့ သတ္တဝါ​တွေလိုပါ့…….။
အဲ့ဒါ ဘာသာ​ရေး ယုံကြည်​မှု တစ်​လွဲဆံပင်​​ကောင်းတဲ့ကြိုးကွ
အဲ့ဒါ အစဉ်​အလာ ခါးစည်းကြိုးကွ
တို့ခါးက ကြိုး​တွေ ……
ကိုယ်​တိုင်​ ဖြတ်​ရဲမှ လွတ်​​မြောက်​မှုရမဲ့ကြိုး
ဟို ဒူး​အော်​ဒိုင်း တို့ဘာတို့ ……. ။
၂၁ ​မေ ၂၀၁၄
ခါးမှာတင် မက တော့ဘူး လည်ပင်းထိတက်ချည်
အစ် အစ် အစ်
တစ်​ချို့ကလည်း အဲ့ဒိလို မမြင်​ကြပြန်​ဘူး ။ ကြိုးနဲ့ အချည်​ခံထားရတာကို ကြံဖန်​ပြီး ဂုဏ်​ယူ ​နေကြတဲ့သူ​တွေကရှိ​သေး ။ သမိုင်းရှိတဲ့ လူမျိုး ယဉ်​​ကျေးမှုနဲ့လူမျိုး ဘာညာသာရကာ ​နေကြာ ကွာစိ ကွစ နဲ့ …………….
သော့ဂလောက်နဲ့ သံကြိုးတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုဖြတ်ခိုင်းတယ် လူဆိုး
​နေ၀န်းနီက ကြိုးလို့တင်​စားတာကို ကိုကို က သံ​ခြေကျင်း​တွေလိုမြင်​​နေတယ်​​ပေါ့ ။ ဒါဆိုလဲ ပန်းပဲ ဖိုသွားပြီး ​ဆောက်​​တွေ တူ​တွေ ​တောင်းပြ်ီး ဖျက်​​ချေဗျာ ။
မည်သူ့ကိုမှ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ဖူးမျှော်မာန်ချရှိခိုးဦးချ ကန်တော့ခြင်းမပြုရ…
ဒါလေးများ… အခုလုပ်.. အခုဖြစ်…
ကိုခိုင်​​ရေ အပြင်​ဘက်​က ​ပြော​တော့သာ လွယ်​တာဗျ ။ သူများ ​တွေ ကျားထိုး ​နေ​တော့သာ ​ဘေးက ထိုင်​​ပြောရတာ လွယ်​သဗျ ။ ကိုယ်​တိုင်​ထိုးကြည့်​​တော့ ထင်​သ​လောက်​မလွယ်​ဘူး ။ ​မွေးရာပါ တုတ်​​နှောင်​ထားတဲ့ ကြိုး​တွေက အများကြီး ​။ ဒါနဲ့ ကိုခိုင်​ မြန်​မာပြည်​ ​တောရွာ​လေး​တွေ ​ရောက်​ဖူးလား ။ အသိအကျွမ်း​ကော ရှိလား ။ ​တောရွာ​လေး​တွေ ​ရောက်​ဖူးရင်​ အဲ့ဒိက လူ​တွေနဲ့ စကား ​ပြောကြည့်​ရင်​ သိနိုင်​လိမ့်​မယ်​ ။ သူတို့ရဲ့ အ​တွေးအ​ခေါ် အယူ အဆက လွန်​ခဲ့ တဲ့ နှစ်​နှစ်​ဆယ်​ ​ကျော်​ အတိုင်း မ​ပြောင်းလဲဖူးဗျ ။ ဒါဟာ ပညာ​ရေး အဆင့်​အတန်း နိမ့်​ကျတာ ရယ်​ ။ ပြင်​ပ ဗဟုသုတ နည်းပါးတာရယ်​ပဲ ။ အယူသည်းမှုကလဲ အရင်​ကထက်​​တောင်​ဆိုးလာသလိုပဲ ။ အဲ့ ​ကြွေး​တွေလဲ အရင်​ကထက်​ ပိုတင်​လာကြတယ်​ ။ အနီးဆုံးမြို့ကို လူတစ်​၀က်​​လောက်​ပဲ တစ်​လ တစ်​​ခေါက်​​လောက်​​ရောက်​ဖြစ်​ကြတယ်​ ။ အလုပ်​အကိုင်​နဲ့ ပတ်​သက်​မှ သာ​ရေးနာ​ရေး ရှိမှ​ရောက်​ဖြစ်​ကြသဗျ ။ အဲ့​တော့ ကိုခိုင်​​ပြောသလို မလွယ်​တာ လွယ့်​ကိုမလွယ်​တာ ။ တစ်​ချို့များ အဲ့လို ကြိုးနဲ့​နှောင်​ထားတာကို အဟုတ်​မှတ်​​နေတာ ။ လူဆိုတာ အထိမ်းအကွပ်​ရှိမှတဲ့ ။ အဲ့​တော့ သန်း​ခြောက်​ဆယ်​ သို့မဟုတ်​ ခုနှစ်​ဆယ်​ ရဲ့ ခုနှစ်​ဆယ်​ ရာနှုန်းအတွက်​ လုံးဝ မလွယ်​ကူ​သေးပါဘူး
အဘနီပြောတဲ့ ဗြဟ္မဏ ဗုဒ္ဓဘာသာကြိုးက ပိုခိုင်နေသလားလို့.
အဲ့ ဗြဟ္မဏ ဗုဒ္ဓဘာသာ ချိုဒါနာ့ မူပိုင်​ချကား​ညော်​
ကိုခိုင်​​ရေ့ ဂဇက်​တက်​မှာ မူပိုင်​ရုံးဖွင့်​ဗျာ ။ မင်​ဘာတစ်​ဦးချင်းစီရဲ့ မူပိုင်​ မှတ်​တမ်းလုပ်​ရရင်​​ကောင်းမယ်​ ။
အရင်တုန်းက လည်း ဒီပုံပြင်ကို ကြားဖူးပါတယ်……
မောင်တောမှာ နေတုန်းကပါ…. NGO တွေ UN တွေ လာတယ်…. ဒေသခံတွေကို လူမှူရေး စီးပွားရေး အဘက်ဘက်က ကူညီပေးတယ်…. ဘာဖြစ်လို့တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်လည်းပေါ့…. အပြင်မှာ ရုံးက နိုင်ငံခြားသားနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအထက်ပိုင်းက လူတချို့အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးကြတယ်…. အဲ့မှာ တယောက် က ပြောတယ် (သူက ရခိုင်သားပဲနော်)….
ကျွန်တော်တို့ က ဘာနဲ့ တူလည်း ဆိုရင်ပေါ့ဆိုပီး စကားအစချီတယ်….
ဒီနယ်က လူတွေက အများစုက ဆင်းရဲကြတယ်… ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှူလည်း ခံရတယ်… ( ဒါက နိုင်ငံတကာ အမြင်ပါ… ဒေသခံလူအချို့ နဲ့ကွဲ ကောင်း ကွဲ နိုင်ပါတယ်….) အဲ့အတွက် ကြောင့် ငါတို့ တွေ ကူကြတယ် ပေါ့…. သူတို့ က ဆင်းရဲမှူကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် လှော်နေတဲ့ လှေ လှော်သားတွေ ဆိုရင် ငါတို့ က ဒီလှေကို ကမ်းကနေ ဝေးဝေး ခွာနိုင်အောင် လှော်တက် တွေ ပေးတယ်…. အင်ဂျင်တက်ပေးတယ်…. လှေ ပြင်ပေးတယ်… အားရှိအောင် အစာကျွေးတယ်…. လှေလှော်တက်အောင် လှေမောင်းတက်အောင် ရေကြောင်းနားလည်အောင်…. အစအဆုံးဗျာ အကုန်သင်ပေးတယ်……
ဒါဆို ဘာကြောင့် လှေက မရွေ့ တာလဲပေါ့………
အဲ့မှာ တော်တော် စားသွားတယ်…..
အစိုးက ဖိနှိပ်လို့ …. လူဦးရေ များလို့ …. မွေးဖွားနှုန်းမချုပ်နိုင်လို့ …. ပညာတက်နည်းလို့ ….. ရောဂါ ထူပြောလို့ …. တကိုယ်ရေ သန့် ရှင်းမှူ လို လို့ … စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်လို့ … ပေါင်းစုံပဲ….
အဲ့ဒါတွေ မှန်လားလို့ပုံပြောသူကို မေးတော့ ခေါင်းခါတယ်…..
မဟုတ်ပါဖူးဗျာ… တကယ်တော့ လှော်တဲ့လူတွေက လှေကို ကမ်းခြေမှာ ချည်ထားတဲ့ ကြိုးကို မဖြေမိလို့ ပါတဲ့……
အဲ့ကြိုးကတော့ ဒေသရဲ့ အယူဝါဒတွေပါ…..
ဆိုလိုချင်တာက ကြားဖူးတဲ့ပုံပြင်လေးပါ… ဆက်စပ်ပီး သတိရသွားလို့ ပါ……
အဲ့ဒါ အစဉ်​အလာ ခါးစည်းကြိုးကွ….ဖြတ်ရမဲ့ကြိုး ၅ ကြိုးတောင်ဆိုတော့
ဖြတ်ရခက်လွန်းလွန်းလို့ သံကြိုး လို့တင်စားတာပါ။ သံကြိုးတောက် ဒီအတိုင်းချီထားရင် ဖြေရလွယ်နေပါအုံးမယ်။ သော့ပါခတ်ထားပါတယ်။ ချည်ထားမှန်းမသိတဲ့ သံကြိူးတွေပါ။ သူတို့ကိုတိုင် မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ လူကြီးမင်း များလာလောက်ဖြေပေးကြပါကုန်။
ခုတလောတော့ ခြေမန်းကွင်းကြိုးကို ဘယ်လိုဖြုတ်ရမယ် မသိဖြစ်နေတယ်။
ကျနော် အကြိုက်ဆုံးကဗျာတွေထဲက အကြိုက်ဆုံးကဗျာတစ်ပုဒ်. . .
ကွကိုယ်တောင် ဖြတ်ရခက်တဲ့ တစ်ချောင်းထဲသောကြိုးနဲ့ ပတ်လည်ရိုက် အူလယ်ချာလယ်…
အနာသိရင်​ ​ဆေးရှိတယ်​ ဆိုသလိုပါပဲ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ​ဝေဒနာရှင်​က ​ပျောက်​ချင်​တဲ့ ဆန္ဒ ရှိဖို့လဲလိုပါတယ်​ ။ အဲ့ ​ဆေးကို ၀ယ်​ယူ မှီဝဲ နိုင်​ဖို့လဲ လိုပါတယ်​ ။ တစ်​​နေ့ နှစ်​​ထောင်​ ဆိုတဲ့ ၀င်​​ငွေ​လောက်​နဲ့ ​တော့ မှီဝဲနိုင်​မယ်​မထင်​ ။ အာဟ အာဟ ( မင်းသားကြီး​လေသံဖြင့်​ )